केन्द्र सरकारले गर्दा पद छोडे : खिमलाल देवकोटा – Google pati
केन्द्र सरकारले गर्दा पद छोडे : खिमलाल देवकोटा
१ श्रावण २०७६ १३:१३
प्रदेश ५ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएको केही दिनमै प्रदेश ३ का उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिए। श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने बताए पनि देवकोटाले भने व्यक्तिगत कारण देखाएका छन्।
संघीयताबारे वकालत गर्ने डा. देवकोटाले १३ महिना योजना आयोगको जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि पद त्यागेका हुन्। १३ महिनाको अवधिमा धेरै काम भएको दाबी गर्ने देवकोटाले तोकिएको समयमसम्म किन जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन् त ? प्रदेश ३ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका डा. खिमलाल देवकोटासँग गरेको कुराकानी :-
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् नि ?
१३ महिनाको कामबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
धेरै अप्ठेरो परिस्थितिमा काम गरिएको हो। वास्तवामा भन्‍ने हो भने १३ महिनामा संघले पनि गर्न नसक्ने काम प्रदेश ३ योजना आयोगबाट भएको छ ।स्रोत : थाहाखबर